I-Decoiler eyi-compact kunye ne-feeder Straighteners zoNcedo lweNgxelo zoKhuseleko China Manufacturer
Inkcazo:Ukondla ngokuSitampu seZithuthi zeZithuthi,Iserver Roll feeder Cofa umgca wokuPunch,Umatshini wokuhambisa imali weServo
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > I-Decoiler eyi-compact kunye ne-feeder Straighteners zoNcedo lweNgxelo zoKhuseleko
I-Decoiler eyi-compact kunye ne-feeder Straighteners zoNcedo lweNgxelo zoKhuseleko
Umzekelo No.: MAC4-1600H
ICoquo Decoiler kunye noMondliyo weStraightener Press Press e-Eed Systems inikezela kubathengi uluhlu olupheleleyo lwemveliso phantse kuzo zonke izicelo ngaphakathi kwestampu seshiti yeshiti kunye nomzi mveliso wokwenza intsimbi.
Nge- Compact Decoiler kunye ne-feeder Straightener Press Press e eed Systems ungaziqhubekisa i- coil material ububanzi ukuya kwi-1800mm, ukuya kubunzulu bezinto ezinokufikelela kwi-9.0 mm kunye nobunzima beetoni ezingama-25.
Ukulungiswa kwezinto zekhoyili kungakunika ii-straighteners ezilula zokuphelisa isaphetha sekhoyili, imigangatho yesicelo esiphezulu ngokubhekisele kumgangatho othe tye, kodwa kunye nokuchaneka kokuqondisa ngokuthe ngqo kwimiqolo yokulungisa i-convex yezicelo eziphezulu.
Izikhulisi ezongeziweyo ezisebenzisa indawo ziyafumaneka ngaphakathi kuluhlu lweemveliso zethu, kunye nokufumaneka kweeservo zokugcina ukutya ngokukhawuleza nangokuchanekileyo kwezinto zekhoyili.
Amacandelo aphambili aneenkcukacha zeCompact Decoiler kunye neFireighteners yabathengi beNgxelo yeeMpepha zokuNondla njengoko ingezantsi:
I-MAC4 i-Decoiler eyi- MAC4 kunye neNkqubo yokuLungelelanisa abaxhasi yeNkxaso- mali isebenza kumzi-mveliso wethu.
I-Decoiler eyi-compact kunye ne-feeder Straighteners ye-feed feed Systems zokwenza umgca wokutya we-bracket coil sheet.
Lo matshini usebenza esebenzela enye kumzi-mveliso wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lwe-U kunye ne- Compact Decoiler kunye ne- feeder Straighteners Press feed Systems .
Inkampani kaMayflay ifunda itekhnoloji yaseJapan kwaye isebenzisa imigangatho ephezulu yemigaqo kulonyulo lwenxalenye, inkqubo yendibano kunye neendawo zokugcina, igxile ekuyileni nasekuboneleleni ngezisombululo ezinobuchule, ezisebenzayo ze- Coil processing Solutions kunye nezisombululo ze- automatic Stamping Line . UMayflay uphuhlisa itekhnoloji yokusika kunye nenkonzo yokujonga. UMayflay ubonelela ngesisombululo esinye sokumisa ukusombulula ingxaki yokondla i-coil strips kwi-media kakuhle, kwaye wandise imveliso kakhulu. Namhlanje, uMayflay lishishini elizinikeleyo elinezinto ezivelisa imveliso ezinesidima esihle, ubuchule bobuchule, ulawulo lwanamhlanje, uthungelwano olubanzi lokuthengisa, kunye nentengiso enobuchule.
Ukuhanjiswa kweenkcukacha: Iintsuku zomsebenzi ezingama-30-70
I-Decoiler straightener feeder 3 kumatshini omnye zii-15-65 zeentsuku zomsebenzi.
Ukondla ngokuSitampu seZithuthi zeZithuthi Iserver Roll feeder Cofa umgca wokuPunch Umatshini wokuhambisa imali weServo IiNkqubo zeZitampu zeZitampu zeZithuthi ezizimeleyo Ukwenza iimoto zeSinyithi seZithuthi Ukunyathela iziXhobo zeZithuthi Ukunyathela izithuthuthu Ukucinezela iziThuthi zeeMoto